शेखर कोइराला महाधिवेशन लड्ने टीम बनाउँदै, यी हुन् सम्भावित उपसभापति र महामन्त्री ! - Media Dabali
काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा आगामी भदौमा हुने १४ औं महाधिवेशनका लागि नेता शेखर कोइराला सभापति पदका बलिया प्रतिस्पर्धी मानिएका छन् ।
कांग्रेसका संस्थापक कोइराला परिवारसँग जोडिएका शेखरले लामो समयदेखि कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छन् । अब चुनाव मुखैमा आएकाले शेखरले टीम बनाउने अभ्यास समेत थालेका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक छलफललाई तीब्रता दिएका छन् भने उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले समेत सभापतिमा लड्न मिडियाबाजी गरिरहेका छन् ।
महाधिवेशनकै चर्चाबीच सोमबार उपसभापति निधि, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेता प्रकाशमान सिंहबीच भेटवार्ता भएको छ । नेताहरूबीच आगामी महाधिवेशनमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।
चुनावी माहोलमा होमिएका शेखर कोइरालाले उपसभापतिमा चन्द्र भण्डारी र महामन्त्रीमा गगनकुमार थापालाई साथमा लिएर युवाको टीम बनाउने चर्चा छ । देउवा र निधि पक्षबाट उपसभापति र महामन्त्रीको को उठ्ने स्पष्ट छैन । तर देउवा पक्षमा उपसभापति र महामन्त्रीमा समेत धेरै आकांक्षी देखिएका छन् ।
हालै सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गाउँ, नगर वडाको अधिवेशन साउन १२ गते, गाउँपालिका, नगरपालिका अधिवेशन साउन १६ गते र प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन २० गते गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रदेश अधिवेशन भदौ १ र २ तथा केन्द्रीय अधिवेशन भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने गरी कार्यतालिका संशोधन गरेर पारित गरेको थियो ।
यसैबीच, सभापति देउवा पक्षकै उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले समेत सभापतिमा उम्मेदवारी दिने इच्छा देखाएका बेला दुबै नेताबीच देउवानिवास बुढानिलकण्ठमा गत शनिबार छलफल भएको थियो । तर छलफलमा दुबै नेताबीच कडा टक्कर हुने देखिएको थियो ।